क्वारेन्टाइनमा आयुर्वेदिक औषधी - Pradesh Today
Homebreaking-newsक्वारेन्टाइनमा आयुर्वेदिक औषधी
क्वारेन्टाइनमा आयुर्वेदिक औषधी
देउखुरी, ५ जेठ ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आयुर्वेदिक औषधी प्रदान गरिएको छ । कोरोनाको आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएका उनीहरूलाई राप्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालयले शक्तिवद्र्धक आयुर्वेदिक औषधी उपलव्ध गराएको हो ।
भारतबाट घर फर्कने क्रममा क्वारेन्टाइनमा बसेका २१ जनालाई शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिका लागि चिकित्सालय तुलसीपुरले चूर्ण प्रदान गरेको
डा. मदन कसमार विसीले जानकारी दिए । उक्त औषधीले रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्ने डा. बिसीले बताए । गुडुची चूर्ण, लहरेगुर्जो, अशोकगन्धा, आमलकी चूर्णको सेवनले विभिन्न रोगबाट बच्न सहयोग पुग्ने कविराज कैलाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राप्ती गाउँपालिका तथा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा स्थानीय जडिबुटीको प्रयोग तथा पहिचान गरी चिकित्सालयले औषधीसहित डाक्टरहरूको परामर्श टोली गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पठाएको स्वास्थ्य संयोजक नारायण राउतले जानकारी दिए ।